मोदी आउनु भारतीय मुसलमानका लागि कस्तो संकेत हो ? « LiveMandu
मोदी आउनु भारतीय मुसलमानका लागि कस्तो संकेत हो ?
१७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १२:०७
चुनावमा वलियो जीतपछि मोदीले निकै प्रष्ट आवाजमा अब आँउदा दिनमा मुसलमान समुदायको पनि बिश्वास जित्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । हुन त भारतको सबैभन्दा ठुलो अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानहरु माथि गत वर्षहरुमा मोदी र भाजपा सर्मथित नेता, गौरक्षा र हिन्दु अतिवादी संगठनका नाममा निकै तनाव र थिचोमिचो नभएको हैन । प्रयागराज बनाँउदै अलाहवादको नाम देखि अन्य धेरै शहरका नाम परिवर्तन अनि क्रियालपाहरु मुसलमान समुदाय विरोधी रहेको पनि आरोप भाजपाले खप्दै आएको छ ।
यस परिपेक्ष्यमा मोदी आउनु के मुसलमान अल्पसख्यंकका लागि नराम्रो संकेत हो त ?
भाजपाका ३०३ सासंदमध्य एकजना पनि मुसलमान समुदायका चाँही छैनन् । पटकपटक मोदीले मुसलमान समुदायको हक र हितका लागि भाजपा कुनै संझैता नगर्ने र सबका साथ सबका बिकास भन्दै अघि बढेको त पाइन्छ तर ब्यबहारमा भनें निकै फरक भएको आरोप मोदीलाई नभएको हैन ।
भारतका सर्वाधिक रुचाइएका मुसलमान नेता असाद्धुदिन अवासीले भनें मोदीको यस भनाई र भाषणको पक्षमा आफु नभएको बताएका छन् । उनी अल ईण्डिया मुस्लीम ईताल्लुनीन मुसलमीन संगठनका प्रमुख हुन् । भाजपाले चुनाव जिते पछि पनि ५ वटा मुसलमान समुदाय केन्द्रित हेट क्राइमका घटनाहरु रेकर्ड भएका छन् । सन् २०१४ मा मोदी शक्तिमा आउना साथ मुसलमान नेता मोहिन शेखको हिन्दु अतिवादी संगठनले हत्या गरेको आरोप पनि छ तथापि यि कुराहरु पुष्टि भनें भैसकेका छैनन् । निखिल वाग्ले लै ट्वीट गरेका छन् उनी महाराष्ट्रका पत्रकार हुन् । भाजपाको असामी चुनावी नारा नै वंगाली मुसलमानबाट असामलाई मुक्त गराउने भन्ने रहेको पनि निखिलले आरोप लगाएका छन् ।
उता कश्मिरीहरुलाई आर्टिकल ३७० को धारा ३५ को ए सेक्सनबाट मोदी सरकारले आफ्नो विशेष अधिकार हटाइदेला भन्ने पीर पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । ५ लाख सेनाका साथ सन् १९८० देखि भारत कश्मिरमा विद्रोहीहरुसंग युद्धरत छ, यस युद्धमा लाख भन्दा बढि निहत्था नागरीकको हत्या भइसकेको छ । कश्मिरको मुद्धामा कतै भारत पनि इज्रेलको बाटो माझैं आफ्नै र कडा हिसाबले मात्रै प्रस्तुत हुने त हैन, सर्वत्र सवाल उठिरहेका छन् ।
के भारतमा मोदीको पूनरागमनबाट हिन्दु मुसलमान ध्रुविकरण शुरु भएको हो त ? धेरैको प्रश्न पनि छ । यस ध्रुविकरण भनें भारत पाकिस्तानको विभाजन देखि नै रहेको इतिहास छ । यस विभाजनमा १० लाख भन्दा धेरै मारिएका र १७ लाख बढि घरबार विहिन भएको इतिहास छ ।
अब यसपाला मोदीले कसरी हिन्दुत्व र मुसलमान अल्पसख्ंकलाई लिएर जाने हुन्, हेर्न बाँकी छ ।